सोधिने प्रश्न - Cannapresso स्वास्थ्य इंक
सीबीडी स्प्रे प्रेरित
मेष V + के हो
सीबीडी Cannabidiol लागि छोटो छ, यो भांग बोट सबैभन्दा प्रमुख स्वाभाविक-निरन्तर cannabinoid घटक को छ। अर्को प्रसिद्ध अणु नभई tetrahydrocannabinol (THC), सीबीडी पूर्ण गैर-psychoactive छ र कहिल्यै तपाईं "उच्च" महसुस गराउँछ। हुनत सीबीडी बस एक भांग बोट फेला 60 cannabinoids को, धेरै वैज्ञानिक अध्ययन सीबीडी सबै cannabinoids को सबैभन्दा ठूलो चिकित्सकीय संभावित possesses संकेत गरेको छ।
सीबीडी सन र गाँजा देखि व्युत्पन्न गर्न सकिन्छ। हाम्रा सबै सीबीडी प्राकृतिक, सबै 50 राज्य अमेरिका मा कानूनी छ बोट-आधारित सन, बाट लिइएको हो। सीबीडी सन देखि व्युत्पन्न औषधीय र चिकित्सकीय लाभ मा धनी र स्वाभाविक THC मा कम छ।
सीबीडी विधान के हो?
सन र गाँजा कस्तो भिन्नता छ?
1 प्लान्ट भिन्नता
दुवै बिरुवाहरु नै प्रजाति को भाग हो हुनत, सन र गाँजा केही महत्वपूर्ण मतभेद छ।
1) a.Hemp अप गर्न 15 फिट अग्लो बढ्छ र लामो विशाल बालाको छ, यो आराम राम्ररी सँगै खचाखच भरिएको छ।
2) एक। गाँजा शायद प्रत्येक बोट बढ्न ठाउँ आवश्यक,5खुट्टा उचाइ नाघ्यो र थप पात र तन्तु संग outwards बढ्छ।
गाँजा र सन दुवै मा, cannabinoids दुई प्रकार खडा आउट: Tetrahydrocannabinol (THC) र Cannabidiol (सीबीडी)
1) गांजा बल्लतल्ल कुनै पनि सबै THC, 0.05-1% बीच औसत सामग्री संग छ। सन औसत भांग बोट भन्दा बढी सीबीडी समावेश गर्दछ।
2) एक औसत गाँजा बोट को फूल 10-14% को THC स्तर समावेश गर्दछ।
2) मारिजुआना तेल 50-60% THC, 10-15% सीबीडी समावेश गर्दछ।
प्रत्येक तेल को4प्रयोगहरू
1) सन, उच्च सीबीडी, कम THC सामाग्री, सामान्यतया आराम, मइस्चराइजिंग सुखदायक, शान्त लागि प्रयोग।
2) गाँजा, उच्च THC, कम सीबीडी सामाग्री, सामान्यतया मनोरंजन र psychoactive लागि प्रयोग।
सीबीडी, cannabidiol लागि छोटो, एक गैर-psychoactive रासायनिक CANNABIS मा, यौगिकों चिकित्सा लाभ को धेरै cannabises लागि जिम्मेवार छ। अर्कोतर्फ, THC, को भांग मुद्दाहरू सम्बन्धित "उच्च", गराउँछ कि tetrahydrocannabinol, गाँजा मा psychoactive मिश्रित लागि छोटो, तिनीहरूले रासायनिक यौगिकहरु को एक वर्ग हो जो दुई पूर्ण अलग cannabinoids छन्।
THC शायद सबै भन्दा राम्रो गाँजा मा psychoactive संघटक भएकोमा ज्ञात छ। सीबीडी तथापि, गैर-psychoactive छ। अर्को शब्दमा, सीबीडी तपाईं उच्च प्राप्त गर्न सक्छन्। मनोरंजन प्रयोगकर्ताहरूलाई निराशाजनक गर्दा, सीबीडी यस अद्वितीय सुविधा के यो त एक चिकित्सा रूपमा आकर्षक बनाउँछ छ।
डाक्टर सामान्यतया न्यूनतम साइड इफेक्ट, चिकित्सा गाँजा को स्वीकृति एउटा प्रमुख बाधा भएको छ जो संग उपचार रुचाउँछु। त्यसै गरी, सीबीडी विभिन्न रोगबाट संग साना छोराछोरीलाई व्यवहार गर्न प्रयोग गरिएको छ।
THC केही मानिसहरू चिन्तित वा paranoid महसुस हुन चिनिएको छ। तर सीबीडी विपरीत प्रभाव विश्वास गरिन्छ। वास्तवमा, अध्ययन सीबीडी THC ​​ingesting कारण पनि फिक्री लड्न काम गर्दछ भनेर देखाउँछ। अध्ययन को संख्या पनि सीबीडी गर्दा यसको आफ्नै मा प्रशासित फिक्री कम गर्न सक्छ भन्ने।
गैर-psychoactive हुनुको साथै सीबीडी Antipsychotic गुण देखिन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले सीबीडी गाँजा प्रयोगकर्ता THC को psychosis-जस्तो प्रभाव कम गरेर पनि उच्च रही देखि परियोजना सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तथापि, THC मन-फेरबदल गतिविधि विनियमन सीबीडी लागि राम्रो छ भनेर सबै छैन। यसको आफ्नै मा, सीबीडी पागलपन संग मान्छे को लागि एक Antipsychotic चिकित्सा रूपमा परीक्षण भइरहेको छ।
गाँजा सबैभन्दा सामान्य प्रयोगहरू को एक निद्रामा सहायता रूपमा छ। THC गाँजा गरेको सो-inducing प्रभाव अधिकांश लागि जिम्मेवार हुन विश्वास छ। अर्कोतर्फ, अध्ययन सुझाव सीबीडी सीबीडी एक निद्रामा चिकित्सा रूपमा गरिब विकल्प बनाउन, wakefulness प्रवर्द्धन गर्न कार्य। अरूलाई ऊर्जा बढाउने ज्ञात बेला भांग कारण प्रयोगकर्ताहरूको केही उपभेदों drowsy महसुस गर्न किन निद्रामा मा सीबीडी र THC को विपरीत प्रभाव व्याख्या हुन सक्छ।
5) कानूनी स्थिति
सबैभन्दा देशहरूमा गाँजा र THC आसपास सख्त व्यवस्था छ जबकि, सीबीडी को कानूनी स्थिति कम स्पष्ट छ। यो संघीय व्यवस्था अन्तर्गत तालिका म दबाइ रूपमा वर्गीकृत छ देखि संयुक्त राज्य अमेरिका मा, सीबीडी प्राविधिक अवैध छ। सीबीडी एक दबाइ फारम, Epidiolex भनिन्छ, हालै मात्र एफडीए द्वारा खाली गरिएको थियो गंभीर मिर्गी संग बच्चाहरु मा परीक्षण गर्न।
अर्कोतर्फ, सीबीडी कानुनी रूपमा आयात गर्न सक्छन् जो हुन अमेरिकामा बेचिएका र, सन फेला केही कम्पनीहरु जहाँ सन उत्पादन अन्य देशका उच्च-सीबीडी सन अर्क आयात गरेर यस loophole फाइदा लिएका छन्।
त्यहाँ सन सीबीडी र गाँजा सीबीडी बीच कुनै पनि फरक छ?
"सीबीडी सीबीडी-यो छ यो आउँछ जहाँ कुरा छैन।"
हो यो कुरा गर्दैन। फूल-भन्दा माथि छ र केही औद्योगिक सन उपभेदों को पात सीबीडी को एक कारगर स्रोत (notwithstanding कानुनी मुद्दा) हुन सक्छ, तर सन द्वारा कुनै cannabidiol को सर्वोत्कृष्ट स्रोत अर्थ छ। औद्योगिक सन सामान्यतया सीबीडी-धनी भांग भन्दा टाढा कम cannabidiol समावेश गर्दछ। औद्योगिक सन को भारी मात्रा किनभने सन माटो बाट भारी धातु ड्र एक "जैव-accumulator" छ जसबाट विषाक्त प्रदूषक को जोखिम हुर्काउन, सीबीडी एउटा सानो रकम निकाल्न आवश्यक छ। एकल-अणु सीबीडी एक प्रयोगशाला मा संश्लेषित वा झिकिएको र परिष्कृत देखि औद्योगिक सन महत्वपूर्ण औषधीय terpenes र भांग उपभेदों फेला माध्यमिक cannabinoids गुमाएको छ। यी यौगिकों आफ्नो चिकित्सकीय लाभ बृद्धि गर्न सीबीडी र THC अन्तरक्रिया गर्नुहोस्।
सीबीडी किन कानुनी छ?
2014 फारम बिल राष्ट्रपति बराक ओबामा, 2014 फारम बिल धारा 7606 द्वारा हस्ताक्षर अनुसार सीबीडी ostensibly derives जो देखि वृद्धि र औद्योगिक सन को खेती, अधिकार।
सीबीडी (cannabidiol) को वैधता लागि, सबैभन्दा ठूलो फरक THC स्तर छ। जबकि गाँजा बिरुवाहरु THC को उच्च स्तर समावेश, सन कुनै 0.3 भन्दा बढी% THC युक्त, को psychoactive रासायनिक को धेरै सानो समावेश गर्दछ। यो एकल फरक के भन्दा गाँजा देखि सन भेद गर्न भर छ।
2013 को औद्योगिक गांजा कृषि ऐन - को नियन्त्रित पदार्थ को परिभाषा देखि औद्योगिक सन निकाल्न अधिनियम Amends "गाँजा।" "औद्योगिक सन" बढ्दै कि वा सुक्खा वजन आधारमा एक डेल्टा-नौ tetrahydrocannabinol प्रतिशत अधिक 0.3 भन्दा को एकाग्रता संग, को बिरूवा CANNABIS SATIVA एल र यस्तो बोट को कुनै पनि भाग मतलब परिभाषित गर्दछ। एक व्यक्ति बढ्छ वा अनुसार राज्य व्यवस्था संग औद्योगिक सन बनाउने उद्देश्यका लागि यो प्रक्रियाहरु भने त्यो एकाग्रता सीमा भेट्न CANNABIS SATIVA एल समझे।
DEA: "नयाँ दबाइ कोड (7350) मा [को नियम] को नियन्त्रित पदार्थ ऐन (CSA) मा निस्केको सेट गाँजा को परिभाषा देखि बहिष्कृत छन् सामाग्री वा उत्पादनहरु समावेश गर्दैन स्थापित। नयाँ दबाइ कोड मात्र ती अर्क गाँजा को कैसीनो परिभाषा भित्र कि समावेश छ। एक उत्पादन गाँजा को कैसीनो परिभाषा देखि बहिष्कृत भएको भांग बोट भागहरूमा केवल शामिल भने, यस्तो उत्पादन नयाँ दबाइ कोड (7350) मा समावेश हुनेछ वा गाँजा (7360) को लागि दबाइ कोड "
सीबीडी को लाभ के हुन्?
सीबीडी (cannabidiol) चिकित्सा भांग तर THC को साइड इफेक्ट बिना फेला स्वास्थ्य लाभ को पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदान गर्दछ। क्लिनिकल सेटिङमा सीबीडी, व्यवहार क्यान्सर मदत गर्न convulsions, सुनिंनु, चिन्ता, वाकवाकी, तनाव, कम रक्तचाप, टाउको दुखाइ र धेरै स्वास्थ्य चिन्ता राहत देखाइएको छ। केही रिपोर्टहरू सीबीडी को उच्च एकाग्रता वास्तवमा THC को प्रभाव बृद्धि गर्न सक्ने सुझाव। हामी सीबीडी, Cannabidiol तेल, वा सन सीबीडी तेल को प्रभाव को रूपमा दावी गर्न सक्छन् बेला, हामी समर्थकले र सीबीडी को लाभ को लागि स्वतन्त्र खोजी गर्न सुझाव दिन्छौं।
म सीबीडी देखि "उच्च" प्राप्त हुनेछ?
न हाम्रो गांजा निकाल्ने उत्पादनहरु सबै मात्र THC को मात्रा पहिल्याउन छ जो औद्योगिक सन, बनाइएका छन्, त्यसैले त्यहाँ हाम्रो उत्पादनहरु लिएर कुनै psychoactive प्रभाव छ। यो भांग को psychoactive घटक छ कि THC छ।
सन प्रयोग गरेर लाभ के हुन्?
सन आवश्यक फैटी एसिड भनिन्छ मानव शरीर स्वाभाविक उत्पादन गर्दैन, कि र आहार नष्ट हुन पर्छ आवश्यक पोषण घटक प्रदान, उत्कृष्ट nutitional मूल्य समावेश गर्दछ। यसबाहेक, वैज्ञानिक अनुसन्धान उदीयमान सामान्य तरिकाले-भएकोमा सन तेल देखि सीबीडी को खपत समर्थन र स्वस्थ राख्छ, तर तपाईं "उच्च" प्राप्त गर्दैन। एक अनुमान 25,000 प्रयोगका साथ, भोजन, फाइबर, भवन निर्माण सामाग्री र इन्धन लागि - मात्र सन अक्षय र छिटो-बढ्दै छ, बोट लगभग हरेक भाग useable छ। सन CO2 sequesters र फस्टाउनको लागि herbicides आवश्यकता छैन। यो पनि यसलाई अघि लगाए थियो भन्दा राम्रो अवस्थामा माटो छोडेर।
पर्याप्त लिदा, यसको लागि यो प्रभावकारी बन्न साधारण मात्र बारे 20-30 मिनेट लाग्छ। अधिकांश मानिसहरू पहिलो बाहिर सुरु गर्दा, आशा गर्न के थाहा छैन र अक्सर आफ्नो अवस्था मदत गर्न सुरु गरिएको छ कि बेवास्ता। कुनै रिपोर्ट "उच्च" भएकोले अधिकांश मानिसहरू यो केहि पनि गरिरहेको छ थाहा छैन। मात्र एक समय पछि तिनीहरूले थियो हुन सक्छ कुनै पनि दुखाइ अब त्यहाँ वा तीव्र रूपमा छ भन्ने महसुस गर्छन्। को "भावना" पहिचान गर्न सक्षम छ कि सबै एक सूक्ष्म शान्त छ, कि सामान्यतया यति सूक्ष्म छ। धेरै प्रयोगहरू पछि, धेरै मानिसहरू अहिले प्रशासन पछि मिनेट बन्द "किनारा लिएर" नोटिस कि रिपोर्ट गरेका छन्। तर, सबै भन्दा newcomers लागि, तिनीहरूले एक विशाल परिवर्तन र यसको सिर्फ यो दुखाइ व्यवस्थापनका लागि प्रयोग भइरहेको गर्नुपर्छ, जबसम्म जस्तो छैन आशा। उचित मात्रा यी उत्पादनहरु लिदा दुखाइ को एक सौम्य जारी सामान्यतया एकदम सजिलै देखिने छ।
को Vape तेल प्रयोग गर्दा, कसरी म सीबीडी म रही छु कति हो?
अधिकांश मानिसहरू यो कस्तो जाने आफ्नो गांजा Vape तेल समर्पित एक कारतूस गरेर हो। तिनीहरूले vape कलम मा भएको क्यासेट स्थापना र यसलाई समय समयमा दिन भर प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको vape तेल मा सीबीडी को एकाग्रता थाह द्वारा तिनीहरूले यसलाई भर्न गर्दा सीबीडी को क्यासेट छ कति गणना गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, हाम्रो vape तेल प्रति vape तेल 1.5ml सीबीडी को 25mg छ। 1.5ml एक क्यासेट भर्न (तर मात्र रकम ..... त्यसैले तपाईँले प्रयोग कारतूस अनुसार समायोजन) एक साधारण मात्रा हो। त्यसैले, हाम्रो 100mg 10ml vape तेल प्रयोग गर्दा, कसैले सीबीडी को 20mg चाहन्थे भने तिनीहरू पूर्ण 2ml क्यासेट तिनीहरूले प्रयोग प्रत्येक समय vape थियो। तर, फेरि, यो तान्नुहोस् मा आयोजित कसरी लामो पनि धेरै सीबीडी वास्तवमा एक व्यक्तिको शरीर मा हुन्छ कसरी असर गर्नेछ आधारमा।
हाम्रो 100mg 1oml बोतल: द Vape तेल प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 10mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 1ml लिन थियो।
हाम्रो 300mg 1oml बोतल: द Vape तेल प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 30mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 1 / 3ml लिन थियो।
हाम्रो 500mg 1oml बोतल: द Vape तेल प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 50mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 0.2ml लिन थियो।
हाम्रो 1000mg 1oml बोतल: द Vape तेल प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 100mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 0.1ml लिन थियो।
हाम्रो 100mg 15ml बोतल: द Vape तेल 20 / प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 3mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 1.5ml लिन थियो।
हाम्रो 300mg 15ml बोतल: द Vape तेल प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 20mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 0.5ml लिन थियो।
हाम्रो 500mg 15ml बोतल: द Vape तेल 100 / प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 3mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 0.3ml लिन थियो।
हाम्रो 1000mg 15ml बोतल: द Vape तेल 200 / प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 3mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 0.15ml लिन थियो।
हाम्रो 100mg 3oml बोतल: द Vape तेल 10 / प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 3mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 3ml लिन थियो।
हाम्रो 300mg 3oml बोतल: द Vape तेल प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 10mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 1ml लिन थियो।
हाम्रो 500mg 3oml बोतल: द Vape तेल 50 / प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 3mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 0.6ml लिन थियो।
हाम्रो 1000mg 3oml बोतल: द Vape तेल 100 / प्रति vape तेल को 1 एमएल सीबीडी को 3mg छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईं सीबीडी को 10mg चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं 0.3ml लिन थियो।
मेष V + के?
आश्वासन आराम, हामी बेचन उत्पादनहरु विश्वव्यापी सबै 50 राज्य अमेरिका मा कानुनी र लगभग 40 देशहरुमा छन्। यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा कुनै पनि निर्धारण न त चिकित्सा कार्ड आवश्यकता छैन। तपाईं अर्को देशमा छन् भने, आफ्नो स्थानीय व्यवस्था जाँच गर्नुहोस्। धेरै राज्य मारिजुआना देखि सीबीडी तेल legalizing थालेका; र केही अमेरिका यसलाई तल मतदान गरेका छन्। सीबीडी सीबीडी छ र यो किनभने गाँजा कानुनी मुद्दा छ, यो प्रभावकारी हुन लागि गाँजा वा सन आउँछ कि कुरा छैन, जबकि, मारिजुआना देखि सीबीडी तेल वा आफ्नो राज्य मा कानूनी हुन सक्छ हुन सक्छ। तर, गांजा देखि सीबीडी तेल गाँजा र गाँजा सीबीडी तेल मा आफ्नो राज्य व्यवस्था बिना सबै 50 राज्य अमेरिका मा कानूनी छ।
म यी उत्पादन प्रयोग गरेपछि औषधि परीक्षण पास हुनेछ?
हामी यस बारे हाम्रो ब्लग पेज मा सम्पूर्ण लेख लेखिएको छ। : हेर्न निम्न शीर्षक क्लिक गर्नुहोस् सीबीडी कारण कसैलाई औषधि स्क्रिनमा राम्रा परीक्षण गर्छ?
किन यति महंगा छ?